Books Essays समयको स्वाद | Social, musical and literary material
Category Archives: Books Essays समयको स्वाद
Essays are written by Nawa Raj Subba
Books 13, Books Essays 2, Books Essays समयको स्वाद
November 23, 2018 nrsubba
समयको स्वाद – निबन्धसंग्रह
लेखक- नवराज सुब्बा
प्रकाशित मिति २०७० साल- वाणी प्रकाशन विराटनगर ।
निबन्धसंग्रहभित्र निम्नानुसार सचनाहरू संग्रहित छन् । संस्मरण खण्डः १ सुर्तीको स्वाद २ विष्टबाको सुन्तला ३ हारमोनियमको नशा४ मितज्यू !५ देउसी २०३८ ६ तेह«थूमको सम्झनामा७ पाथिभरादेवीप्रति मेरो अटल श्रद्धा छ ८ गीति–एल्बम अमूल्य जीवनको रचनागर्भ ९ विदेशमा देखेका कुरा १० धन्यवाद फेसबुक ११ चामल र खुसी १२ सूर्यग्रहणको दिन१३ द्वन्द्व को पीडा १४ रिक्सावाला१५ नेपालीपन ढकमक्क फक्रेको दार्जिलिङ१६ नेपाली भाषाको गुरूत्वाकर्षण १७ साहित्यिक यात्रामा फूल र काँडाहरू१८ चार श्रीमतीहरू१९ स्व. देवकुमारी दिदीलाई काव्यात्मक श्रद्धासुमन२० जपरोग (व्यङ्ग्य) विचार–खण्डः २१ संवेदना, कला र ग्ल्यामर २२ गजल पजल होइन२३ स्रष्टा र सञ्चारको सम्बन्ध२४ रेडियोप्रति श्रोता र स्रष्टाहरूको अपेक्षा२५ द्वैध भूमिकाको अन्त होस् २६ रोकिन्नन् हातका कलमहरू !
मैले सबैभन्दा धेरै आशीर्वाद आगो ओसार्दा पाएको छु । अर्थात् बाल्यकालमा चुरोट, बिंडी तथा सुर्ती सल्काउन चुल्होबाट आगो ल्याइदिँदा गाउँघरका धेरै अभिभावकहरूबाट मैले थुप्रै आशीर्वाद पाएँ । अँगेनाबाट चिम्टाले आगोको कोइला च्यापेर ल्याइदिँदा त्यसबेला मलाई धेरैले ‘ठूली–ठूली’ भनेर आशीर्वाद दिए । कसैले ‘जम्दार हुनु’ ‘सुब्दार हुनु’ भनेर आशीर्वाद दिए । कसैकसैले ‘जर्नेल हुनु’ ‘कर्नेल हुनु’ भनेर पनि आशीर्वाद दिए । तर मलाई भने सानोमा पाइलट बन्ने इच्छा थियो । किनभने कहिलेकाहीँ हाम्रो गाउँमाथिको आकाशमा हवाईजहाज, हेलिकप्टर उड्ने गर्दथ्यो त्यो देखेपछि मलाई भित्रैदेखि पाइलट हुने इच्छा जागेको थियो । ‘पछि तँ के हुन्छस् हँ ?’ भनेर कसैले सोध्दाखेरि म सोही ईच्छा प्रकट गर्ने गर्दथें । त्यो थाहा पाउने कतिपयले मलाई ‘पाइलट हुनु’ भनेर पनि आशीर्वाद दिएका थिए । तर त्यो आशीर्वाद पूरा भएन । मेरो घरमा दोकान पनि थियो । दोकानमा ग्राहकहरू शिव बिंडी, गणेश बिंडी किन्दथे । कसैले आशा चुरोट, गैंडा चुरोट र हुनेखानेले चाहिं याक चुरोट किन्दथे । र त्यो सल्काउन कतिपयले मलाई ‘आगो ले ले ! नवराज !’ भन्दथे । म पनि बडो फूर्तिकासाथ चुल्होमा पुग्दथें, आगो लिन । आज्ञाकारी बालकझैं चुल्होबाट चिम्टाले आगोको कोइला च्यापेर ल्याइदिन्थें । कहिले बल्दै गरेको दाउरा तानेर खुरूखुरू ल्याइदिन्थें । कहिलेकाहीं भर्खरै बल्न थालेको दाउरै उठाएर लुरूलुरू ल्याइदिन्थें । यसरी आगो झिक्दा अगेना निभेमा यता आमाको खप्की खानुपर्दथ्यो, त्यसैले त्यो काम प्रायः म आमाको आँखा छलेर गर्ने गर्दथें । त्यसबेला आगो पुर्याएपछि म उपर बर्सने आशीर्वाद पाएर म बुझिनबुझी फुरूङ्ग हुन्थें । उसबेला म सायद चुल्होबाट आगो जेनतेन ल्याउनसक्ने त्यस्तै चार–पाँच वर्षको बालक हुँदो हुँ । त्यसबेला कहिलेकाहिँ मलाई मनमा एकप्रकारको जिज्ञासा उठ्ने गर्दथ्यो– ‘कस्तो हुन्छ होला ? त्यो सूर्तीको स्वाद’ भनेर । एकपटक मैले उनीहरूले फालेका ठूटा उनीहरू उठेर गएपछि सल्काएर चाखें । तर, अहँ मलाई त्यो पटक्कै मीठो लागेन । मलाई त्यसको स्वाद बन्दै मन परेन । Continue reading Samayako Swad →